Ndị na -emepụta ngwugwu na -agbanwe agbanwe | Ụlọ ọrụ na -ebubata ihe na -agbanwe agbanwe China & ndị na -ebunye ya
Mkpa akpa akpa/akpa akpa maka nkwakọ ngwaahịa nri/akpa akpaaka kpụrụ akpụ
Enwere ike ịhazi ụdị obere akpa dabere na nkọwa gị. Ọmụmaatụ gụnyere:
Akpa akpa convex (ergonomic ma dị mfe ijigide)
Obere akpa Hourglass (dị mma maka mmiri mmiri)
Obere akpa nke nwere akụkụ gbara okirikiri
Akpa akpa nwere akara ergonomic
Mpempe akwụkwọ apịpịpịara nke ejiri spouts wuru (wepu mkpa maka akwa ma ọ bụ ahịhịa iji rie ngwaahịa ahụ)
Site na ụdị ahaziri iche ruo na ihe ọhụrụ na mbibi, Changrong Packaging na-enye ike ịchọrọ iji mepụta obere akpa ndị ahịa nwere ọpụrụiche.
Ihe eji eme ihe: Nri ụmụaka, ọka na ihe mejupụtara, achịcha, nri nri, ncha & ofe, kọfị & tii, ihe ọveraụveraụ, nri azụ na nri n'oké osimiri, nri dị njikere, osikapa na pasta, nri anụ ụlọ, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, nri mmiri ara ehi, ahụike & ịma mma.
Obere akpa nzaghachi/akpa nri anụ ụlọ/dị njikere iri nkwakọ ngwaahịa nri
Mkpọghachi azụ azụ aghọọla ụzọ dị irè ma na -agbanwe agbanwe karịa usoro ọdịnala. Nkwakọ ngwaahịa Changrong na -enye akpa nzaghachi mgbochi dị elu nke bụ azịza nkwakọ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe maka nri edozi na ndị ọzọ dị njikere iri nri. Akpa nzaghachi anyị na-enye ịdị mma na nkwakọ ngwaahịa nri esiri esi ma na-enye aka na nhọrọ nkwakọ ngwaahịa enyi na gburugburu ebe obibi.
N'ihi ịdị mma ha, obere akpa nzaghachi edochila ụdị omenala karama na ụdị nkwakọ ngwaahịa karama.
Ihe eji eme ihe: Nri nwa, ofe na ihendori, nri azụ na oke osimiri, nri dị njikere, osikapa & pasta, nri anụ mmiri, nri mmiri ara ehi, anụ
Akpa akpa dị larịị/akpa nkwakọ ngwaahịa nri/akpa mkpọchi akpa plastik
Akpa dị larịị, akpa akwụghị ọtọ nwere omimi na ike maka ngwaahịa. Akpa igbe na -enye otu igbe igbe juru eju iji dochie akpa+Igbe. Na -enye akụkụ anọ + ogwe ala maka mbipụta mbipụta, igbe igbe na -enye mbelata ọnụ ahịa site na iwepu mkpa maka nkwakọ ngwaahịa okpukpu abụọ.
Nkwakọ ngwaahịa Changrong na -enye ọtụtụ akpa akpa doro anya, dị maka ịzụta n'ịntanetị. Nkwakọ ngwaahịa Changrong nwekwara ike ịwụnye akpa igbe iji gboo mkpa gị.
Ihe eji eme ihe: Kọfị, ngwongwo akọrọ, ọka, ihe na -atọ ụtọ, mkpụrụ osisi jụrụ oyi, nri mmiri, nnu & pChangrong Packaginger, herbs & herbs
3 n'akụkụ akara & oghere obere akpa/Akpa akpa rọba/akpa rọba nri
Akpa akpa n'akụkụ atọ na-enye ụzọ dị mfe, dị ọnụ ahịa maka nnukwu ngwaahịa ma ọ bụ obere ngwaahịa. Akpa ndị a bụ ngwọta dị ọnụ ala, dabara adaba maka ịgbatị ndụ nchekwa nke ọtụtụ ngwaahịa nri.
Nkwakọ ngwaahịa Changrong na -enye nnukwu akpa akpa akpa ngwaahịa, dị maka ịzụta n'ịntanetị. Nkwakọ ngwaahịa Changrong nwekwara ike wuo akpa akpa iji gboo mkpa gị.
Ihe eji eme ihe: Anụ, chiiz, obere nri, azụ, ọkụkọ, nri mmiri, bred na mmiri mmiri
Mpempe akwụkwọ kwụ ọtọ ma ọ bụ ewepụghị. Igwe mgbatị ahụ na -emepụta omimi na ikike maka ngwaahịa. Mkpọ nwere ike mepụta ala ngọngọ. Akụkụ anọ na -enye ohere akara ngwaahịa dị ike.
Nkwakọ ngwaahịa Changrong na -enye ọtụtụ akpa kọfị kọfị dị maka ịzụta n'ịntanetị. Nkwakọ ngwaahịa Changrong nwekwara ike wulite akpa gusset/quad akara iji mezuo ihe ndị ị chọrọ.
Ihe eji eme ihe: Kọfị, esi nri na-tray, arịa akọrọ, ntụ ntụ, ihe na-esi ísì ụtọ, tii
Obere akpa/ihendori & nkwakọ ngwaahịa ncha/akpa mmiri mmiri
Nkwakọ ngwaahịa na-anaghị akwụ ọtọ maka ihe ọquụ liụ, sauces, pastes na ngwakọta dị njikere ịgwakọta. Ihe a na-ekwu maka ịwụsa, nkwakọ ngwaahịa a na-enye nhọrọ nkesa 'enweghị-ọgbaghara' yana nhọrọ nri 'na-aga'. Ezigbo maka igosipụta ngwaahịa na shelf.
Nkwakọ ngwaahịa Changrong nwere ihe dị n'ịntanetị maka ịzụta. Nkwakọ ngwaahịa Changrong nwekwara ike mepụta akpa akpa akpa iji zute ihe ndị ị chọrọ.
Ihe eji eme ihe: Mkpụrụ osisi puree, ngwaahịa, sauces, achịcha, ntụ ntụ dị njikere ịgwakọta
Akpa akpaaka/akpa mkpọchi Zip/jiri obere mkpọchi kwụ ọtọ
Nkwakọ ngwaahịa na-akwụghị ụgwọ maka ihe ọquụquụ na ngwongwo a mịrị amị. Ọtụtụ mgbe nwere windo doro anya iji lelee ngwaahịa, obere akpa ndị a na -enye mmetụta siri ike na -adị na shelf ụlọ ahịa ka ha na -enye arụmọrụ ohere maka ịkpakọba.
Nkwakọ ngwaahịa Changrong na -enye akpa akpa doro anya na azụ azụ/doro anya n'ihu maka ịzụta n'ịntanetị. Maka atụmatụ ndị ọzọ dị ka nkwụsị ogologo mgbapu na obere akpa microwavable, Nkwakọ ngwaahịa Changrong nwere ike wuo omenala iji gboo mkpa gị.
Ihe eji eme ihe: Ofe, ofe, nri dị njikere, ọka, mkpụrụ, mkpụrụ oliv